PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-01-28 - Lukhungethwe yizinselelo olobhejane
Lukhungethwe yizinselelo olobhejane
Sekusungulwe isikhungo sokubhekana nokuzingelwa kwabo
Ilanga langeSonto - 2018-01-28 - Izindaba - bhekin@ilanganews.co.za BHEKI NDLOVANA
IZINSELELO ezisekhona embhidlangweni wokulwa nobugebengu obujule kakhulu bokubulawa kobhejane, yizigelekeqe ezifuna izimpondo zabo, zikhomba ngokusobala ukuthi lude ukhalo olusazohanjwa ukuze kutholakale isisombululo sale nkinga.
Miningi imizamo eseyenziwe yizinhlangano ezahlukene zezokongiwa kwemvelo emhlabeni jikelele, yokunqanda lesi sihlava ukuba singabhebhetheki kodwa isixazululo kule nkinga asikatholakali.
Obhejane yizilwane eziyigugu kodwa ukubulawa kwabo sekubabeke engcupheni yokushabalala.
Nakuba mhlawumbe abanye bengafikelwa yimicabango yokuthi cishe ayisebenzi le mizamo esiyenziwe kuze kube manje ukulwa nalobu bugebengu njengoba inkinga iqhubeka, kodwa umnu Jabulani Ngubane ongumphathi wesiqiwi esikhulukazi KwazuluNatal, futhi esinomlando onothile ihluhluwe Imfolozi Park (HIP) eyenganyelwe ngabezemvelo KZN Wildlife, uthi le mizamo iyasebenza futhi iyalekelela kakhulu ekulweni nale nkinga.
“Ngaphandle kwale mizamo, isimo ngabe sibi ngaphezu kwalokhu esiyikho,” kusho umnu Ngubane.
Uthi njengoba lingakatholakali ikhambi kule nkinga, okubalulekile wukuthi kwenziwe yonke imizamo ukuze isimo singabhebhetheki, bagcine sebephele nya obhejane.
Umnu Werner Myburgh oyisikhulu esiphezulu se-peace Parks Foundation, okungenye yezinhlangano zezemvelo ezibambe iqhaza emizamweni yokulwa nalesi sihlava uthi impela lude ukhalo olusazohanjwa ukuze kunqotshwe le mpi.
Uthi enye yezinselelo ekubhe- kaneni nezigelekeqe ezibulala obhejane wukuthi ziyakwazi ukuthola ulwazi oluzisiza ekwenzeni lobu bugebengu.
Maphakathi naleli sonto EHIP kwethulwe ngokusemthethweni isikhungo sezobuchwepheshe esizolekelela emizamweni ekhona yokulwa nale nkinga. Lesi sikhungo esibizwa ngokuthi yi-tactical Joint Operations Centre (Nerve Centre), sithathwa njengenjini ezoqoqa lonke ulwazi olubalulekile, oluzosiza ekutheni izigebengu zisheshe zibanjwe ngisho nangaphambi kokuba zenze umonakalo.
Lesi sikhungo sakhiwe ngoxhaso lwezimali olukhishwe wuhulumeni wase-united States of America (USA), nabe-peace Park Foundation.
Unkk Sherry Zalika Sykes oyiUS Consul General Consul, obe- thamele lo mmcimbi, uthi uma bengayenzi le mizamo yokulekelela ekulweni nalesi sihlava, nasekugcinweni kwemvelo, esikhathini esizayo izoshabalala le imvelo ekhona.
Uthe I-USAID ihlela ukutshala isamba esiwu-$15 million eminyakeni eyi-5 ezayo, ezinhlelweni zokugcina kwemvelo e-afrika. Ingxenye yalesi samba izotholwa yiningizimu Afrika.
Okusemqoka athi kufanele kwenziwe wukuqwashisa umphakathi, wazi ukuthi lokhu kubulawa kobhejane kuwubugebengu obunomthelela nasekubulaweni kwabantu okuqhubekayo kwamanye amazwe ase-afrika.
Lesi sikhungo siqale ukusebenza ezinyangeni ezimbalwa ezedlule kanti kubikwa ukuthi imisebenzi yaso isiyaqala ukubonakala njengoba abezemvelo KZN Wildlife bethi sekukhona oboshiwe ngosizo lwaso.
Umnu Bheki Khoza oyisikhulu esiphezulu esibambile sezemvelo KZN Wildlife, uthi kulesi siqiwi izinga lokubulawa kobhejane liphezulu uma kuqhathaniswa nakwezinye izindawo, kuyacaca ukuthi izigebengu sezithe ukushenxa kwezinye izindawo, zagxila lapha.
Lokhu kufakazelwe nangungqongqoshe wezokongiwa kwemvelo kuzwelonke, unkk Edna Molewa othi isimo Kwazulu-natal siyakhathaza, sibi kakhulu kunakwezinye izindawo.
Ngokwezibalo ezikhishwe wumnyango wezemvelo kuzwelonke kuleli sonto kubikwa ukuthi kusukela mhla lulunye kumasingana (January) kuya mhla zingama-31 kuzibandlela kubulawe obhejane abayi-1028.
Kanti njengamanje, selokhu kuqale unyaka, Kwazulu-natal sekubulawe obhejane abayi-12.
IYAQHUBEKA imizamo yokulwa nobugebengu obujulile bokubulawa kobhejane. Njengamanje kubikwa ukuthi isimo sinzima kakhulu Kwazulu-natal uma kuqhathaniswa nakwezinye izindawo eningizimu Afrika.